Lugta PSG - PSG: Tuchel waxay dhacdaa shaqalaha Paris, dhaleeceyntii ugu dambeysayna waa dhacday - FOOT 01 - TELES RELAY
Cagta PSG - PSG: Tuchel wuxuu qaribay shaqaalihii Paris, dhaleeceyntii ugu dambaysayna way dhacday - FOOT 01
Bishii Juun 2018, Paris Saint-Germain waxay go’aansatay inay kaacsato Thomas Tuchel si uu ugu guuleysto Unai Emery. Sannad iyo badh ka dib, xaashida dheelitirka ee Jarmalka ayaa lagu qasay.
Xilli ciyaareedkii hore, tababarihii hore ee Borussia Dortmund ayaa ku guuldareystay inuu ceshto Coupe de la Ligue iyo Coupe de France, intaas waxaa sii dheer in laga ciribtiray wareega XNUMXka Champions League. Xaqiiqdii, Thomas Tuchel waa inuu muujiyaa wax kale inta lagu jiro qeybta labaad ee xilli ciyaareedka hadda socda haddii uu doonayo inuu sii wado kasbashada caasimadda. Gaar ahaan tan iyo markii loogu talagalay Frédéric Piquionne, wax laga weydiiyay waxa ku saabsan RMC, Farsamayaqaanka Jarmalka ayaa si cad wax uga qaban kara shaqada shaqaalaha tayada leh.
Piquionne uma tudho Tuchel
Tuchel ma ahan tababarihii ugu fiicnaa L1, marka la barbar dhigo wixii uu ilaa haatan qabtay. Waxaan ogaadey inuusan muddo dheer gacanta ku haynin xooggiisa xoogaa hadda. Gabi ahaanba wuxuu ka daboolay Cavani doorashadiisa. Icardi ayaa markii dambe la beeray. Haddii aan tababare ahay, waxaan sameeyaa isla saxdaas. Laakiin kulamada qaar, Cavani wuxuu xaq u lahaa inuu ciyaaro, oo goolal dhaliyo. Tuchel, wuxuu ku shaqeeyaa ugu hooseeya ee ugu hooseeya shaqaalaha uu haysto. Waa iska caadi in uu ugu horreeyo horyaalnimada isaga iyo xiddigaha uu isagu ku haysto. Waxa kaliya ee wanaagsani waa inuu isku daro afarta fantastik. Laakiin waxaan arki doonaa marxaladda soo laabashada… Waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah ciyaartoydu ay ku heli doonaan kursiga keydka, iyo inay dhibaatooyin badan u horseedi doonto… ” aaminay la taliyihii ee faallooyinka ay soo sheegeen FootRadio.com. Waxaa weli muuqanaysa in Thomas Tuchel uu ku guuleysan doono helitaanka qof walba in uu oggolaado sannadka 2020…
Hindiya: Prashant Kishor: Lataliyihii hore ee Congress Prashant Kishor ayaa su’aalo ka weydiisay aamusnaanta Sonia Gandhi ee NRC | Wararka Hindiya
2006, Zidane, khilaaf essions Qirashadii Sagnol - VIDEO